Oké ifufe nke oge ọkọchị: kedu ihe ha bụ, kedu ka ha si sie ike ma dị ize ndụ | Netwọk Mgbasa Ozi
N’ezie, ị dịrịla ndụ ndị dị ike ndaeyo ndaeyo. Ma ọ bụ na n'oge ụfọdụ n'afọ, ọnọdụ gburugburu ebe obibi nwere ike iwepụta oke ifufe. N'okwu a, anyị ga-ekwu maka oke ifufe nke oge ọkọchị na nguzobe ha.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma etu ebili mmiri n’oge ọkọchị na ihe nsonazụ ya bụ, nke a bụ ọkwa gị.
1 Oké mmiri ozuzo
2 Olee oge oké ifufe nke udu mmiri na-etolite
3 Otu esi amata ma ọ bụrụ na oké ifufe ahụ dị nso
4 Ihe ize ndụ nke oké ifufe
Mgbe oge ọkọchị dị n’akụkụ nkuku, okpomoku na-amalite ịrị elu. Na nke a, otu a ka ikuku ikuku na ebili elu. Ka anyị ghara ichefu na ike ikuku nke ikuku na-arụ ọrụ n'ụzọ ụfọdụ. Ikuku na-ekpo ọkụ pere mpe, ya mere ọ na-arị elu. Ka ị ruru n'ebe dị elu, ị ga-ahụ ikuku oyi ọzọ na-ajụ oyi. Ọ bụrụ na anyị eleba anya na profaịlụ dị ọkụ nke ikuku dị ala anyị ga-ahụ na ọnọdụ okpomọkụ na-ebelata ka anyị na-eme ka ogo ya dị elu. Yabụ ọ bụrụ na ikuku na-ekpo ọkụ na-ezukọ ikuku oyi karịa mgbe ọ ruru elu dị elu, ọ na-amalite ịba ụba.
Ogo nke odide nke ikuku na-adabere na okpomọkụ nke ọ ruru n'ogologo egosiri na ọnọdụ okpomọkụ dị na oyi akwa ahụ. Ọ bụrụ na ogo nke odide na ikuku dị ike ma ọnọdụ gburugburu ebe obibi na-adịgide adịgide, igwe ojii na-ezo mmiri nwere ike ịmalite oké ifufe.
Oge okpomọkụ na-abụkarị anwụ na-acha na-ekpo ọkụ. Agbanyeghị, n’ụbọchị ụfọdụ, ọbụlagodi na anwụ na-acha, elu igwe malitere itiri ma kwusi n’oké mmiri ozuzo. Ọ bụ ogo dị elu nke na-emepụta ụdị oke ifufe ndị a. Ka anyị hụ ihe usoro nwere ike na-etolite n'oge okpomọkụ oké ifufe.
Olee oge oké ifufe nke udu mmiri na-etolite
Nke mbụ bụ iji nyochaa ihe mbụ ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị. Anyi na ebido n’ubochi nwere okpomoku di elu ma anwu n’acha gburugburu. Ka gburugburu na-ekpo ọkụ, ya mere ikuku ikuku gbara ya gburugburu. Mgbe ikuku na-ekpo ọkụ na okpomọkụ ya na-abawanye, ọ na-ebili n'ihi na ọ dị mfe ma gbasaa na nrụgide. Uzu a na-ekpo ọkụ nke gbagoro n'ebe dị elu na-abata na ikuku ikuku oyi. Ọdịiche a dị n’etiti ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ na-akpata na-ekwu na mmiri na-ekpo ọkụ amịkọrọ tụlee mmiri ozugbo. Ọdịiche dị n'etiti ọkụ na oyi na-eme ka ọ na-esite n'oké ifufe ha na-ewekarị ihe dịka otu elekere.
Nsogbu ndi di iche iche a na-efe bu ike mmiri ozuzo na-ada. Dika otutu mmiri na-ekpo oku ma buru umu irighiri mmiri nke na-eme igwe ojii mmiri ozuzo na ngwa ngwa, ike nke ike ndọda na-akpali ha. Ka anyị ghara ichefu na maka ụmụ irighiri mmiri nwere ike ịmalite na elu ugwu, achọrọ mkpa hygroscopic condensation nuclei. Ngwurugwu ndia bu ihe ndi ozo karia ihe ndi ozo di na gburugburu nke na-ese n'elu mmiri nke na-abia isi ihe maka mmiri mmiri ka azobe ha.
Mgbe mmiri nke mmiri rutere na ibu nke nwere ike iguzogide ike ndọda, ha na-ada n'ụdị mmiri ozuzo. Oké mmiri ozuzo na-abụkarị ezigbo mmiri mana ọ na-ewe naanị otu elekere. Nke a bụ oge ọ na - ewe maka igwe ojii mmiri ozuzo mepụtara iji pụọ n'anya n'ihi ọrụ nke ikuku a. Ka oké ifufe ahụ na-apụta, ikuku ikuku na-ekpo ọkụ nke na-ebili ma na-abanye n'ikuku ikuku ndị ọzọ dị ala na-arịgoro azụ.
Otu esi amata ma ọ bụrụ na oké ifufe ahụ dị nso
Okporo mmiri ozuzo na-ejukarị ndị mmadụ anya n’ihi na ha na-eme ọsịsọ na atụghị anya. Igwe ọkụ nwere ike inye anyị ihe ga-enyere anyị aka ịmata ma ebili mmiri ahụ ọ̀ dị nso ma ọ bụ na ọ naghị adị. O nwekwara ike inye anyị ntụle ọzọ gbasara ma ihe na-abịakwute anyị bụ oke mmiri ozuzo. Onwere uzo di nfe nke gha enyere anyi aka imuta ihe nile banyere oke ifufe a.
Kpụrụ a gụnyere ilele ọkụ ọkụ na ịgbakọ ogologo oge ọ ga-ewe ruo mgbe a nụrụ ala. A na-ahụ àmụmà ozugbo ọ mepụtara ya. Agbanyeghị, égbè eluigwe na-agba ọsọ dị ka ụda. Nke a ọsọ bụ 340 mita kwa abụọ. Yabụ, dabere na oke ikuku mmiri ahụ dị anya site na anyị, ọ ga-ewe ihe ma ọ bụ obere karịa iji nweta ihu ala ahụ. A kilomita nke anya sụgharịrị n'ime mkpokọta 3 sekọnd. Dabere n’otú o si ada ụda, anyị nwere ike ịkọ amụma ebe udu mmiri a na-enwe n’oge ọkọchị.
Ọ bụrụ na ihe dịka sekọnd atọ gafere site na mgbe anyị hụrụ àmụmà ruo mgbe égbè eluigwe dara, anyị nwere ike ịmata na oke ifufe ahụ dị otu kilomita. Ọ bụrụ na sekọnd isii gafee, ọ ga-abụ kilomita abụọ. Nke a bụ otu, anyị nwere ike ịkọ ebe oke ifufe ahụ nọ n'oge ahụ. N'ihi ụdị nchịkọta a, anyị nwere ike ịgbapụ ịhụ oké ifufe a tupu ya erute anyị.
Ihe ize ndụ nke oké ifufe
Dịka anyị kwurula na mbụ, ọ bụ ezie na ebili mmiri nke oge ọkọchị na-adịkarị obere oge, ha na-adịkarị egwu. Ihe ize ndụ a bụ n'ihi ike ike ha ji daa. Anyị ga-enye otu ihe atụ na-emekarị n'ime oge ọkọchị. Anyị bụ ihe mbụ n'ụtụtụ ma anyị na-eweli ndị ìsì na-ahụ na ọ bụ anyanwụ na-enwu gbaa na okpomọkụ na-agba anyị ume ịsa ahụ na ọdọ mmiri ahụ. Otú ọ dị, Oké okpomọkụ a nwere ike ibute oke mmiri ụbọchị niile.
Ihe bụ nsogbu bụ na, mgbe ụfọdụ, oké ifufe na-esokarị ya. Ọ bụ akụ mmiri igwe na-ebute oke mbibi ihe. Ebube na-akpata site na odide na-eme ngwa ngwa. Akụ mmiri igwe a nke nwere ike ibute mmebi ihe na ọrụ ugbo, karịa ihe niile.
Oke udu mmiri ha na-esokarị égbè eluigwe. Ha bụ ihe ọkụ ọkụ na-enwu na mbara igwe mgbe niile, ya mere, a na-atụ aro ka ịghara ịgbaba na osisi ma ọ bụ metụta ihe ọla. Ngwaọrụ na ihe eletrọnik ọ bụla tinyegoro na ọkụ eletrik kwesiri ịgbapụ n'ihi na oke ifufe ndị a nwere ike imebi ha.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oke ifufe nke oge ọkọchị na otu ha si eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké mmiri ozuzo
Oke osimiri Adriatic